Ahoana ny fampiasana fitaovana fitadiavam-baota Google ambany?
Ny mpampiasa webmasters dia mampiasa fomba samihafa mba hahazoana jirikan'ny rohy mankany amin'ny tranonkala. Indraindray, ny fomba fanaon'izy ireo dia tsy lavitry ny lalàna. Ny backlinks rehetra dia tsy mitovy mihitsy. Araka ny efa mahazatra, ny sasany amin'ny rohy ivelany dia mety ho sarobidy sy azo ekena, raha ny hafa kosa dia toa mahatsara ny kalita na tsy misy intsony.
Google dia mamela ny azonao rehetra hamela ireo tomponà tranonkala hanala ny rantsambatany mahantra ary hiala amin'ny sazy. Ny fitaovana Google Disavow dia nanjary làlana tsara ho an'ny mpivarotra an-tserasera nanomboka tamin'ny famoahana ny penguin. Tamin'ny taona 2012, ny vaovao farany tao amin'ny Google Penguin dia nanaparitaka ny sariam-panatontosana fikarohana ary nanala ireo raki-tsarobidy rehetra tamin'ny spam tao amin'ny tambajotra bilaogy manokana. Amin'izany dia mamorona olana vaovao ary misy fiantraikany ratsy amin'ny tontolo SEO manontolo. Nanomboka nanandrana nanararaotra ity rafitra ity ny webmasters tamin'ny famoronana adiresy an-tranonkalan'ny spam, ho fanamafisana ny toerany amin'ny SERP. Nahomby ny sasany tamin'ireo ezaka ireo. Marika marobe no voakasik'ilay fiantraikan'ny mpifaninana aminy. Izany dia nahatonga ny filàna mafy hifehy ny rohy rehetra izay manondro ny tranonkala iray. Izany no antony nanapahan'i Google ny hamorona fitaovana fampifandraisan-kifandraisana Disavow mba hanomezana fahafahana ireo tompon'ny tranonkala hanara-maso ny rohy ivelany rehetra. Ity fitaovana fikarohana momba ny backlinks ity dia nanampy ireo tompon-trano an'arivony an'arivony mba hifehy ny toe-draharahan'ny rohy.
Nahoana no ilaintsika ny Google Disavow Links?
Ny fehezan-dalàna rehetra momba ny SEO dia mety hisy fiantraikany ratsy amin'ny toerana misy anao sy ny lazanao manokana, indrindra fa i Google dia nanazava mazava fa hosazian'ny sazy rehetra amin'ny tranonkala rehetra izy ireo.
Maro ireo tompona tranonkala te-hahazo rohy mankany amin'ny tranokalany, ary mino fa azo atao ny manangana rohy momba ny rohy malemy ao anatin'ny iray na roa andro. Mazava ho azy fa misy olona afaka mandoa saram-pandraharahana momba ny rohim-pifamoivoizana ary manangona antontan-taratasy vaovao an'arivony ao amin'ny loharanon-keviny tsy misy ezaka. Na izany aza, dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny vondrona mpikaroka ao amin'ny tranonkala. Ny loharanon'ny tranonkalanao dia tsy voatery handao ny laharam-pamokarana amin'ny tranonkala fifandraisana toy izany, fa ny fanafihana spam lehibe sy lava maharitra dia mety handrava tanteraka ny ezaka SEO anao.
Google Disavow Links Tool dia natao manokana hanomezana hery ny mpikarakara webmaster mba hitatitra sy hanolotra rohy spammy mareva-doko amin'ny Google, ary raha tratran'ny fanafihan'ny spam-n'ny mpifanandrina mivantana izy ireo, dia hanampy azy ireo izany mivoaha avy eo ary diovy haingana ny lazany.
Ny fitaovana finday Google backlink dia mamantatra ny rohy spam ary ireo tranonkala izay mamorona azy ireo, ary amin'ny ankamaroany dia tsy hanisy ratsy ny toerana misy azy. Na dia izany aza, maro ireo tranonkala maro no mbola misy fiantraikany amin'ireo hetsika manohintohina ireo, ary mitombo isa ny isam-bolana ny penguin.
Google dia tsy hanome lanja ny rindranasa avy amin'ny sehatra rehetra izay efa nitatitra ny fampiharana ny Google Disavow Links Tool. Ity fitaovana ity dia mahasoa ho an'ireo fitaovam-pikarohana sy webmasters satria manampy hahalala ny tena lanjan'ny loharanom-baovao rehetra izany ary manasazy ny mpamono ny governemanta Source .